दार्जिलिङमा चियाको बगान कस्ले रोप्यो ? ए अंग्रेजका पुच्छरहरु हो इतिहाँस राम्रो सँग पढ गोर्खालीलाई चौकीदारी मात्र गर्छन भन्ने नसोच तिमीहरु अंग्रेजको जुत्ताको सोल चाट्दा हामि छात्ती फुलाएर अंग्रेजसँग लड्दै थियौँ : डा. हर्क बहादुर क्षेत्री (भिडियो सहित)::Nepal's Online News Portal
दार्जिलिङमा चियाको बगान कस्ले रोप्यो ? ए अंग्रेजका पुच्छरहरु हो इतिहाँस राम्रो सँग पढ गोर्खालीलाई चौकीदारी मात्र गर्छन भन्ने नसोच तिमीहरु अंग्रेजको जुत्ताको सोल चाट्दा हामि छात्ती फुलाएर अंग्रेजसँग लड्दै थियौँ : डा. हर्क बहादुर क्षेत्री (भिडियो सहित)
दार्जिलिङ, आषाढ ५ | गोर्खाली माथि हैकम जमाउन खोज्ने बंगलिहरुलाई डा. हर्क बहादुर क्षेत्रीको प्रहार ; दार्जिलिङमा चियाको बगान कस्ले रोप्यो ? ए अंग्रेजका पुच्छरहरु हो इतिहाँस राम्रो सँग पढ गोर्खालीलाई चौकीदारी मात्र गर्छन भन्ने नसोच तिमीहरु अंग्रेजको जुत्ताको सोल चाट्दा हामि छात्ती फुलाएर अंग्रेजसँग लड्दै थियौँ भन्दै डा. हर्क बहादुर क्षेत्रीले भारतियविज्ञहरुलाई यसरी जवाफ नै दिन नसक्ने बनाए त्यो पनि लाइभ टेलिभिजनमा ! हेर्नुहोस भिडियो :